Iidesika-Ubunlog | Ubunlog (Iphepha 3)
Ukusebenziseka kwe-KDE kunye neVeki yeVeki yama-77, Yintoni eza nokuba yintoni ezayo
Iveki yama-77 yokusebenziseka kweKDE kunye neMveliso isixelela ngento ezayo, kodwa nangezinto ezininzi esele zifikile ePlasma.
I-Konsole izakuvumela ukuba usebenzise iimeko ezininzi kwiwindow enye nomsebenzi olandelayo «Splitt»
I-Konsole izakuvumela ukuba usebenze amaxesha amaninzi wesiphelo kwifestile enye ngenxa yomsebenzi abasebenza kuwo.
IPlasma 5.16.2 ilapha ukuze uqhubeke nokupholisha uthotho lwe-5.16
Uluntu lwe KDE lukhuphe iPlasma 5.16.2, uhlaziyo lwesibini lokugcina kolu luhlu lufika luye lwapolisha inguqulelo yamvanje yemeko yemizobo.
Ukusebenziseka kweKDE kunye neMveliso iveki yama-76 iqinisekisa ukufika kombala wasebusuku ukuya kwiX11
Ukusebenziseka kwe-KDE kunye neMveliso iveki yama-76 iqinisekisa ukuba umbala woBusuku uyeza kwiX11. Okwangoku iyafumaneka eWayland.
I-OpenMandriva 4.0 ilapha, iza nezinto ezininzi ezintsha emva kweminyaka emibini yophuhliso
Igosa: I-OpenMandriva 4.0 ifikile ngokusemthethweni. Sekuyiminyaka emibini kuphuhliso kwaye kubandakanya izinto ezininzi ezinomdla.
IPlasma 5.16.1, uhlaziyo lokuqala lwe "bugfix" lolu ngcelele luyafumaneka ngoku
Uluntu lwe-KDE lukhuphe iPlasma 5.16.1, eyokuqala kwezintlanu zokukhutshwa kweshedyuli ye-5.16 ekhutshwe kwiveki ephelileyo.
Izakhelo ze KDE 5.59 ngoku ziyafumaneka kwindawo yokugcina izinto ze KDE
Izakhelo ze-KDE 5.59 ngoku iyafumaneka, yongeza ukuthembeka kunye nokuphuculwa kokusebenza kwimeko yemizobo yePlasma esetyenziswe, umzekelo, Kubuntu.
Ukusebenziseka kweKDE kunye neVeki yeVenkile yama-75: Umbala wobusuku uza kwiPlasma
Ukusebenziseka kweKDE kunye neVeki yeveki yama-75 ayonwabisi njengeeveki ezidlulileyo, kodwa lukhona utshintsho olwenziwayo.
Izicelo ze KDE 19.04.2 zilandela ekhondweni lePlasma 5.16: ngoku iyafumaneka kwindawo yokugcina izinto ezingasemva
Izicelo ze KDE 19.04.2 ngoku ziyafumaneka! Khuphela iinguqulelo ezintsha kwaye wonwabele zonke iindaba. Sikuxelela indlela yokwenza.
IPlasma 5.16 ilawula iidesktops ezibonakalayo ngendlela ezimeleyo
I-KDE Plasma 5.16 iphumile ngoku kwaye iza notshintsho oluninzi. Enye yazo inxulumene nolawulo lweidesktops ezibonakalayo.
IPlasma 5.16 ikhutshwe ngokusemthethweni, ifika ngezaziso ezintsha nokunye okuninzi
IPlasma 5.16 ngoku iyafumaneka! Inguqulelo entsha iza notshintsho olubalulekileyo kwaye apha sichaza ezona zibalaseleyo.
Uluntu lwe KDE licela uncedo lwakho ukuphucula isoftware yalo
Uluntu lwe-KDE luvule iphepha apho sinokuhambisa khona iingcebiso zethu kuwe. Unalo uluvo? Thumela kuye!
Imveliso ye KDE kunye nokuSebenza: Iveki yama-74. Inyathelo elincinci ukubuyela okwangoku
Iveki yama-74 yemveliso kunye nokuSebenza kweKDE isinika inyathelo elincinci ukubuyela umva, kuxhomekeke kwindlela ojonga ngayo, phakathi kwenkqubela phambili. Fumanisa ukuba ingantoni.
Ukusebenziseka kweKDE kunye neMveliso: Yiyo yonke into abayenzileyo ukusukela oko baqalisa inyathelo
Inzame ye-KDE yokuSebenza kunye neMveliso iqhubeke phantse iminyaka emibini. Apha sikubonisa yonke into abayenzileyo ukusukela oko yasungulwa.
Izicelo ze KDE zazisa iwebhusayithi ngenkangeleko entsha kwaye iyahambelana nokusebenza
Uluntu lwe KDE lukhuphe ingxelo entsha yewebhusayithi yezicelo zeKDE. Ngoku ihlelwe ngcono kwaye inikezela ngolwazi oluthe kratya.
I-GNOME kunye ne-NVIDIA zinokuhamba ngcono kakhulu kungekudala
Ukusuka kwinkangeleko yayo, ubudlelwane phakathi kwe-GNOME kunye ne-NVIDIA buya kuba luthando ngakumbi kunenzondo enkosi kutshintsho oluzayo kungekudala.
Ukusebenziseka kweKDE kunye neMveliso: iphulo elisungulwe ukuphucula i-KDE sele ikwiveki ye-73
Kule veki, ukuSebenza kunye neMveliso ye KDE isixelele ngeendaba ezinomdla. Ngena kwaye ufumane malunga nayo yonke into eza kuza kwihlabathi le KDE.
Zama, inkqubo eyalandela kunye nomsindisi yokusebenza yeAntergos
Njengokuba uninzi lwethu lulindele, iAntergos ayisayi kufa. Ukuzama ligama lenkqubo yokusebenza eya kuqhubeka neprojekthi yale nkqubo esekwe kwiArch Linux.
I-GNOME 3.33.2 ngoku iyafumaneka kwaye i-GNOME 3.34 ngoku ikuvumela ukuba ukhethe amaphephadonga
IGNOME 3.34 iyaqhubeka nophuhliso kwaye ngoku ikuvumela ukuba ukhethe amaphephadonga amatsha esiko. Inguqulelo yovavanyo 3.33.2 ngoku iyafumaneka.
I-KDE ilungiselela izinto ezinomdla kakhulu eziza kuza kungekudala
Kule nqaku sithetha ngezinto ezinomdla kakhulu ezizayo kwihlabathi le-KDE, elibandakanya iiPlasma kunye neZicelo zeKDE.
KwiGnome 3.34 iseshoni yeXWayland iya kuqala njengoko kufuneka
I-Mutter ibandakanya utshintsho olusetyenziselwa ukwenza ngokusesikweni i-XWayland xa izama ukuqhuba usetyenziso ngokusekwe kwi-X11 protocol ...
I-KDE 5 Imenyu yeNkonzo yeReImage: hlela imifanekiso ngokuthe ngqo kwiDolphin
Ukuba ufuna ukwenza uhlengahlengiso olusisiseko kwimifanekiso, enjengokuphinda wenze ubungakanani kwakhona, ukusuka kwiDolphin, into oyifunayo ibizwa ngokuba yi-KDE 5 Service Menu ReImage.
IKali Linux 2019.2 ngoku iyafumaneka, kunye neLinux 4.19.28 kunye nezixhasi zeARM
I-Kali Linux 2019.2 ikhutshwe ngokusemthethweni, kunye nokuphuculwa okuninzi njengeLinux kernel 4.19.28 kunye nenkxaso ephuculweyo ye-ARM.
Zama oku ukuba kusalindwe uhlaziyo lwePlasma olungayi kuhamba
Ngaba usalinde ukuhlaziywa kwePlasma okungayi kuhamba? Kule nqaku sichaza ingxaki enokwenzeka kunye nesisombululo sayo.
Uluhlu lwe-beta entsha yeXfce 4.14 kwaye olu lutshintsho lwayo
Emva kweminyaka engaphezu kwemine yokukhutshwa kwesebe leXfce 4.12, kwaqaliswa uhlobo lokuqala lokujonga kuqala ...
IPlasma 5.16 beta ngoku iyafumaneka. Ezi ziindaba ezizakufika ngoJuni
Uluntu lwe KDE lukhuphe iPlasma 5.16 beta. Kweli nqaku siza kukuxelela ezona ndaba zinomdla eziza kufika ngenyanga.
Izinketho zexabiso le-GNOME ukuphucula iziko lezaziso
I-GNOME isebenza ngeendlela ezininzi zokuphucula indawo yokwazisa ngemeko yayo yemizobo kwaye kungekudala iza kuza ku-Ubuntu.
Izicelo ze KDE 19.04.1 ngoku ziyafumaneka. Kule nqaku siza kukuxelela xa unokuhlaziya kunye nendlela yokwenza ngendlela efanelekileyo.
I-GNOME 3.32.2, uhlaziyo lwamva nje kolu ngcelele ngoku luyafumaneka
Iprojekthi yeGNOME ikhuphe i-GNOME 3.32.2, uhlaziyo lwesibini nolokugqibela kolu ngcelele, ukulungisa iibugs kunye nokongeza ukuthembeka.
IPlasma 5.15.5 ngoku iyafumaneka, ngenkxaso ye-emojis eKwin
Uluntu lwe KDE lubhengeze ukukhutshwa kwePlasma 5.15.5, inguqulelo elungisa iibugs kwaye ibandakanya izinto ezintsha ezinje ngenkxaso ye-emoji kwi-Kwin.
[Uphando]: Yeyiphi imeko yemeko yosapho Ubuntu oyithandayo?
Masibone: Yeyiphi imeko yemizobo oyithandayo kuzo zonke ezifumaneka kusapho lwe-Ubuntu? Ngena kwaye uvote. Yeyiphi eyona ilungileyo?
I-ExTiX 19.4 iyayenza kwakhona: inkqubo yokuqala esekwe kwi-Deepin Linux 15.9.3
Njengokuba kwakungonelanga ukuqhubela phambili kukhululo lweDisco Dingo, i-ExTiX 19.4 yinkqubo yokuqala yokusebenza esekwe kwi-Deeping Linux 15.9.3 beta.
I-Netrunner Rolling ikwahlaziywa ngo-Epreli, kwaye ibandakanya umfanekiso omtsha
I-Netrunner Rolling, inguqulelo esekwe kwiArch Linux yeNetrunner Linux, ikhuphe uhlaziyo lwayo ngo-Epreli kuyilo olutsha.
Ubuntu MATE 19.04 ifika nezisombululo zamakhadi eNvidia
Ubuntu MATE 19.04 Disco Dingo ifika nezisombululo zengxaki zamakhadi eNvidia emva nje kokufaka ukusuka ekuqaleni.
Ngaba iPlasma Touchpad ayisebenzi kakuhle kuwe? Zama oku
Kule posi siza kukufundisa iqhinga elincinci ukuze iTouchpad yelaptop yakho isetyenziswe kwi-100% kwi-KDE Plasma. Sukuphoswa yiyo!
I-GNOME 3.32.1 ngoku iyafumaneka, ikakhulu ukulungisa iibugs
Iprojekthi yeGNOME ikhuphe i-GNOME 3.32.1, uhlaziyo oluya kongeza uzinzo kunye nokuthembeka kwenye yeediskt ezaziwa kakhulu.
ILinus Torvalds ifuna ukuba iLinux ifane ne-Android
ILinus Torvalds ixhalabile ngokwahlulwa kweLinux kwaye ifuna ukuba ifane ne-Android. Ngaba iyavakala le nto? Kulungile, ewe. Siyakucacisela.
Ubuntu MATE 19.04 kunye ne-18.04.2 ziyafumaneka kwi-GPD Pocket kunye ne-GPD Pocket 2
Ubuntu MATE 19.04 kunye Ubuntu MATE 18.04.2 ngoku ziyafumaneka kwi-GPD Pocket kunye ne-GPD Pocket 2 iikhompyuter. Iindaba ezimnandi!
I-Linux Mint 19.2, igama "codina" Tina "ngembeko kwimvumi edumileyo
I-Linux Mint 19.2 iya kubizwa ngegama "Tina" kwaye iya kubandakanya izinto ezintsha ezinomdla njengokuphuculwa komphathi wefestile.
Isiseko se-OS sihamba siye kwiFlatpak kwaye ayisosiqhulo
Inkqubo yokusebenza ye-OS enomtsalane esekwe kwi-OS isiwe kwiiphakheji zePlppak. Kuthetha ukuthini konke oku kwaye kuya kwenzeka ntoni ngoku?
I-Linux Lite 4.4 ikhutshwe ngokusemthethweni. Isekwe kuhlobo lwamva nje lwe-LTS ye-Ubunto, oko kukuthi, Ubuntu 18.04.2 LTS.
Inguqulelo entsha ye-Mate 1.22 ilapha kwaye zezi ziindaba zayo
Emva konyaka wophuhliso, ukumiliselwa kwenguqulelo entsha ye-MATE 1.22 kwimozulu yedesktop kwaziswa, ngaphakathi apho ...
I-Solus 4 «Fortitude» ngoku iyafumaneka. Sikuxelela yonke into entsha ebandakanya
Ngoku iyafumaneka uSolus 4, uhlaziyo lokugqibela olukhulu lwenkqubo yokusebenza eguquguqukayo kunye nemeko yemeko yeBudgie. Sikuxelela zonke iindaba zayo.
IGNOME 3.32 ngoku iyafumaneka. Ezi ziindaba zakho
IGNOME 3.32 ngoku iyafumaneka. Kweli nqaku sikubonisa ezona ndaba zibalaseleyo zenguqulo entsha yale meko yemizobo.
I-KDE Plasma 5.15.3 ngoku iyafumaneka kunye nokuphuculwa kwePlppak
I-KDE ikhuphe iPlasma 5.15.3, eyona nto inomdla enomdla kakhulu kukuphuculwa komphathi wepakeji yePlppak. Sikuxelela into ekufuneka uyazi.
Iipakethe ze-6 ezigqwesileyo ze-Ubuntu kunye / okanye iziphumo zakho
Asinakho ukungayihoyi inkqubo yethu yokwenza izinto namhlanje sikuzisela iipakethe zemifanekiso ...
IPlasma Mobile isibonisa inkqubela phambili yayo eBerlin
I-KDE isibonisa inkqubela phambili yePlasma Mobile kwi-sprint yayo yokuqala yaseBerlin. Kukho izinto ezinomdla kakhulu. Fumana yonke into apha.
I-GNOME 3.32 izakujongeka ngcono enkosi kwi-Fractional Scaling
Ukukhutshwa okuzayo kwe-GNOME 3.32 kuya kujonga ukubonga okungcono kwisikali esilinganiselweyo abebesebenza kuso iminyaka.
Indlela yokuba neendawo ezininzi zedesktop kuBuntu nakwiziphumo?
Namhlanje siza kubona indlela yokubanendawo engaphezulu kwesinye kwidesktop yethu. Oku kubhaliwe…
I-LXD 3.11 ngoku ifumaneka ngokulungiswa kunye nokuphuculwa okuthile
I-LXD 3.11 ngoku iyafumaneka ukukhuphela kunye nokufakwa. Inezilungiso zebug kunye nezinye iindaba. Sikuxelela ukuba ziziphi.
IPlasma 5.12 LTS ihlaziywa ngezinto ezininzi ezintsha
I-KDE ikhuphe iPlasma 5.12.8, uhlaziyo kuhlobo lwamva lweLTS lwendawo enomtsalane kunye nokusebenza kweLinux.
I-Linux Mint inokumisela ilogo entsha kungekudala
Ukuba sinikela ingqalelo kwinto esiyibonayo kwingxelo yayo yeveki, iLinux Mint izakukhupha ilogo entsha kungekudala. Apha siyakubonisa yona.
I-KDE isimema kwi-OpenExpo eMadrid apho baya kuthi bonise iindaba zabo zamva nje
Ngomhla olandelayo kuJuni 20 sinesivumelwano kwi-OpenExpo eMadrid, apho i-KDE izakusibonisa iindaba zakutshanje malunga neprojekthi yayo.
Uyifaka njani iPantheon desktop kwi-Ubuntu LTS kunye neziphumo?
Imeko yedesktop yePantheon yinxalenye yeprojekthi yokuhanjiswa kweLinux Elementary OS. Kubhaliwe kwasekuqaleni ngeVala kunye neGTK3 ...
I-Linux Lite 4.4 RC1 ngoku iyafumaneka, ukukhutshwa kokugqibela ngo-Epreli 1
I-Linux Lite 4.4 ilahle iilebhile "ze-beta" kwaye inguqulelo yokuqala yoKhetho loMgqatswa wale nkqubo yokusebenza ilula ngoku iyafumaneka.
I-KDE Plasma 5.15.2 ngoku iyafumaneka ngokulungiswa kwe-bug
I-KDE Plasma 5.15.2 ngoku iyafumaneka, emva kweveki ukukhutshwa okulungisa ezinye iibugs.
IiLinux zokusebenza: I-LXD yeekhompyuter zeChannelbook
Ukuba unayo i-Chromebook, ngoku kunokwenzeka ukusebenzisa ii-Linux izicelo kwikhompyuter yakho ngenxa yento entsha ebizwa ngokuba yi-Linux Apps.
I-OS engapheliyo: inkqubo ye- «hybrid» enomdla kakhulu kwi-aesthetics yeselfowuni
Ukuba ujonga inkqubo yokusebenza ekhawulezayo, ethembekileyo, elula, ene-aesthetics entsha kunye nezinto ezininzi onokukhetha kuzo, i-OS engapheliyo yile nto uyifunayo.
I-GNOME 3.32 Beta 2 ngoku ifumaneka ngophuculo oluninzi
Idesktop yeGNOME 3.32 ngoku iyafumaneka ukukhutshelwa, uguqulelo olubandakanya ukuphuculwa okuninzi kwenye yezona ndawo zidumileyo zemizobo.
I-KDE Plasma 5.15.1 ngoku iyafumaneka ukulungisa iibugs
I-KDE Plasma 5.15.1 sele ikhutshiwe kwaye, njengoluhlaziyo oluncinci, iya kulungisa iibugs kuhlobo lwangaphambili.
I-Wonderwall, umphathi wephepha lodonga wenkqubo yakho
I-Wonderwall ngumphathi wephepha lodonga onamandla wobunye kunye ne-GNOME, ekuvumela ukuba ukhangele, ukhuphele kwaye usebenzise ii-wallpapers ...
Uyifaka njani iCinnamon kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
ICinnamon yindawo yasimahla kunye nevulekileyo esekwe kwidesktop esekwe kwi-GTK. ICinnamon yaziswa okokuqala ...
Ungalukhupha njani ulwandiso lweGnome Shell?
Ukuba ungomnye wabo basandula ukufika ku-Ubuntu kwaye abazi ncam malunga nenkqubo, ngeli xesha ...
Abaphuhlisi bo-Ubuntu basebenza ekunciphiseni ukusetyenziswa kweGnome
Kubonakala ngathi ingxaki yokusetyenziswa kwezixhobo yi-Gnome Shell kwimo ye desktop kwi-Ubuntu yimbali engapheliyo.
Uyifaka njani indawo ye-KDE Plasma desktop kwi-Ubuntu 18.10?
Emva kofakelo oluchanekileyo okanye uhlaziyo kuhlobo olutsha lwe-Ubuntu 18.10, sinokuqala ngokuziqhelanisa n ...
5 imixholo ebalaseleyo ye-GTK ye-Ubuntu 18.04 LTS kunye neziphumo
Ngaphezulu kwesihlandlo esinye, ezinye iingoma ziye zabelwana ngazo, apho zizinto nje zokudityaniswa kwezi, ze ...
Uyifaka njani indawo yeManokwari kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Usenokuba uvile ngosasazo lweBlankOn Linux olusisiseko esisasazwa ngokusasazwa kweLinux ...
Uyenza njani iGnome Shell ijongeke njengeMac OS?
Ngeli xesha siza kuthatha ithuba lokungashukumi okusingqongileyo esikunika kona kunye nabo bathanda i-Mac OS desktop
Uyifaka njani iMATE kwi-Ubuntu 18.04
Isifundo esincinci sendlela yokufaka i-MATE desktop kwi-ubuntu 18.04, inguqulelo yamva nje ye-Ubuntu eza ne-Gnome 3 desktop enzima ...
Inguqulelo entsha yeGnome 3.30 yendalo esingqongileyo yedesktop ngoku iyafumaneka
Kutshanje, iprojekthi ye-GNOME ithumele ingxelo yokugqibela ngohlobo lwe-GNOME 3.30 enegama lekhowudi 'iAlmeria'. Le nguqulo yazisa ukuphucula ...
Sineentsuku ezimbalwa kude ukufika kweGnome 3.30
Kwiintsuku nje ngaphambi kokufika kwenguqulelo entsha yeGnome 3.30, ekushiyeke iveki kuphela, ezi zizinto ezintsha ...
Iimpawu zeDesktop ziya kubuyela kwi-GNOME 3.30
Umphuhlisi weGnome, uCarlos Soriano wenze ingxelo apho atyhila into entsha enokufumaneka kwi ...
Iphasiwedi ekhuselekileyo, umphathi omtsha wegama eligqithisiweyo leGnome kunye noBuntu
Iphasiwedi ekhuselekileyo ngumphathi wegama eligqithisiweyo elikhuthazwe liqela leGnome. Umphathi wegama eligqibeleleyo elihambelana nefomathi zeKeePass ...
Imixholo emi-6 emikhulu yeGtk ukunika idesktop yakho inkangeleko entsha
Ukuba ufuna ukunika Ubuntu bakho inkangeleko entsha, ndiyakumema ukuba ujonge inqaku elilandelayo apho ndibelana nawe ngokudityaniswa okuncinci
Faka indawo yedesktop ye-Deepin kwi-Ubuntu 18.04 LTS
I-Deepin OS, ndinokuxelela ukuba oku kukusasazwa kweLinux kwemvelaphi yaseTshayina, ngaphambili yayisekwe Ubuntu, kodwa ngenxa yotshintsho ...
Kungenxa yoko le nto namhlanje siza kwabelana ngee-newbies ngeendlela ezimbini zokufumana imeko ye-KDE Plasma desktop kwimo yethu Ubuntu
Uyifaka njani imixholo ye icon yeNumix kunye neNitrux kwi-Ubuntu 18.04?
Ubuntu inomxholo omkhulu we icon, ujongeka umhle ngenkangeleko yokuqala yenkqubo. Kwi-Linux sinethuba lokutshintsha inkangeleko yenkqubo ngendlela esithanda ngayo. Ukusuka ekutshintsheni imeko-bume yedesktop, umxholo wendalo, ii icon phakathi kwabanye.
Nika amandla ukufakwa kwe-Gnome extensions kwi-Ubuntu 18.04 LTS
Ngeentsuku nje ezimbalwa emva kokuphehlelelwa ngokusesikweni kwe-Ubuntu 18.04 ngeli xesha wenze ufakelo kunye noqwalaselo lokwenza ngokwezifiso inkqubo yakho, usenokuba uqaphele ukuba uzame ukufaka ulwandiso lweGnome ngekhe ukwenze ngokulula.
Faka indawo ye-Unity desktop kwi-Ubuntu 18.04 LTS
Kule posi intsha ndiza kwabelana nawe ngendlela esingayifaka ngayo imeko-bume ye-Unity desktop kwi-Ubuntu 18.04 kunye neziphumo ezivela kwiphakheji ye-meta esiyifumana kwindawo yokugcina esemthethweni Ubuntu.
Imixholo eli-10 ye-GTK iqokelelwe kwinkqubo yakho
Ngeli xesha siza kuthatha ithuba lokujonga ezona mxholo zidumileyo nezintle zeGTK esinokuzifumana kwiwebhu, kuba enkosi kutshintsho olusuka kubumbano lisiya eGnome sinenani elikhulu lezicwangciso esinokuthi sizenze ngokwezifiso ngeendlela ezahlukeneyo kwinkqubo yethu.
Olunye lweempawu ezintle kunye nezibonelelo endizithandayo malunga neLinux yinto enokwenzeka yokuba ndikwazi ukuyenza ngokwezifiso zethu kwaye nangcono ukuba ndikwazi ukuyinika imbonakalo eyahlukileyo ngenxa yemimandla eyahlukeneyo yedesktop ekhoyo kuyo.
I-UKUI indawo yedesktop elinganisa iWindows 7
I-UKUI (Ubuntu Kylin ujongano lomsebenzisi) yindawo yedesktop ephuhliswe ngabasebenzi baka-Ubuntu Kylin yenye yeencasa ezininzi uBuntu anazo. I-UKUI yimfoloko yeM Mate ekwayifolokhwe yeGnome2.
Sebenzisa isiqalisi sesitayile seMac kunye neSlingscold ku-Ubuntu
Molweni bafo, molweni ekuseni, ngeli xesha ndiza kunibonisa indlela yokufaka iSlingscold kwinkqubo yethu. Kwabo bangaziyo ndiza kukuxelela ukuba iSlingscold sisiqalisi sesicelo esibhalwe eVala sisebenzisa i-GTK ekhupha isiqalisi seMac OS X.
I-Deepin OS kukusasazwa kweLinux kwemvelaphi yaseTshayina, ngaphambili yayisekwe kwi-Ubuntu, kodwa ngenxa yotshintsho rhoqo lokuhlaziywa rhoqo, utshintsho lwesiseko lwenziwa luthatha iDebian njengesiseko.
Ngokufika okusondeleyo kwenguqulelo entsha yoBuntu, baninzi abakwinkqubo yokuhlaziya. Ngelixa enye yemicimbi ...
Kukhutshwe ngokusemthethweni i-GNOME 3.26
Enye yezona ndawo zidumileyo zedesktop phakathi koluntu lweLinuxera ihlaziyiwe yinguqulelo entsha kunye notshintsho olutsha nolungcono ...
Uyifaka njani iBudgie Desktop 10.4 kwi-Ubuntu
UBudgie yidesktop emiselweyo yenkqubo yokusebenza kweSolus, ebhalwe ekuqaleni, eyinika ukudibanisa njengoko inokufakwa kunye nezinye iimeko
Uyifaka njani i-GNOME 3.20 kwi-Ubuntu 16.04
Kule posi siza kukubonisa indlela yokufaka i-GNOME 3.20 kwi-Ubuntu 16.04 Xenial Xerus kwaye ubuyisele umva wakho xa kukho imfuneko
Isakhelo se KDE 5.37.0 Iza kwi KDE Plasma 5 Desktops nge 119 Utshintsho
Sityhila iindaba eziphambili kunye nohlengahlengiso lwenkqubo entsha ye-KDE ye-5.37.0 ye KDE Plasma 5 iidesktops.
Imeko-bume ye-desktop ye-GNOME 3.26 ingena kwiBeta kwaye iza kufika kwifom yokugqibela ngoSeptemba 13
Iprojekthi ye-GNOME ibhengeze ukuba indawo ye-desktop ye-GNOME 3.26 ingene ngokusesikweni kwisigaba seBeta sophuhliso lwayo.
I-Linux Mint vs Ubuntu
Sijongene neLinux Mint vs Ubuntu: isantya, ujongano, ukusetyenziswa ngokulula, iinkqubo, yeyiphi engcono kwaye yeyiphi eshiyeke nayo? Fumanisa!
Dash kwiPaneli, Guqula ibar yomsebenzi ube yindlela yeWindows
U-Dash kwiPaneli lulwandiso lweGnome Shell ekhupha iipaneli zokudibanisa idokethi kunye neziqalisi kwibar enye, usebenzisa uninzi ...
Ifolokhwe yokuqala yoBumbano 8 ngoku iyafumaneka kwi-Ubuntu 16.04
I-Yunit, ifolokhwe yokuqala yoBumbano 8, ngoku iyafumaneka ukusebenzisa nokufaka ku-Ubuntu, kodwa hayi e-Kubuntu okanye Ubuntu MATE, ngenxa yeelayibrari zayo ezindala.
I-Lumina 1.3, inguqulelo entsha yale desktop engaziwayo
I-Lumina 1.3 yinguqulelo yamvanje yokukhanya kunye nedesktop engaziwayo esinayo Ubuntu, idesktop esebenzisa iilayibrari zeQT ...
Ubuntu 17.10 nge-GNOME iya kuba nenkxaso kwifolda yasekhaya ebhaliweyo
I-System76 iya kongeza inkxaso yokubethela ifolda yasekhaya kwindawo ye-desktop ye-GNOME kwenkqubo yokusebenza ye-Ubuntu 17.10 (Artful Aardvark).
Izandiso zegnome Shell: ikamva lokwenyani lobunye?
Ubuntu busasebenza kulwandiso lweGnome, ebonisa ukuba luyakuba lutshintsho ukusuka ku-Ubuntu ukuya kwi-desktop, kodwa ngaba iya kusebenza ngokwenene?
Ikhuphe ingxelo yophuhliso entsha yeGnome Tweak Isixhobo 3.25.2
Isixhobo seGnome Tweak sisixhobo esiphuhlisiweyo ukulawula iinketho eziphambili zeGnome Shell ezinje ngokutshintsha imixholo, ii icon, iimenyu kunye nokunye.
Izicelo ze KDE 17.04.2, ngoku ziyafumaneka kubasebenzisi be KDE Plasma 5 ngobuninzi bezilungiso zegciwane
Izicelo ze-KDE 17.04.2 zifika namhlanje zingaphezulu kwe-15 izilungiso ze-bug eziye zafunyanwa kwizicelo ezahlukeneyo kunye nezinto.
Ngoku unokuba nefowuni yeefestile ezininzi ngenxa yeGnome's Dash to Dock
I-Dash to Dock, ulwandiso lweGnome Shell, sele ivumela ukuphindwaphindwa kwescreen, ngendlela yokuba umsebenzisi abenedokodo kwiscreen ngasinye abasisebenzisayo ...
Faka iCinnamon 3.4 kwi-Ubuntu 17.04
ICinnamon yindawo yedesktop yeenkqubo ze-GNU / Linux, ezenziwe ngabaphuhlisi beLinux Mint njengefoloko yeGnome Shell
Uhlaziyo lwamva nje lwe-Ubuntu 17.10 utshintsha i-Unity desktop kwi-GNOME
Uhlaziyo lwamva nje lwe-meta-package ye-Ubuntu meta-package ngokuma kwendalo ye-Unity desktop ngokongeza i-GNOME Shell endaweni yoko.
Faka iGnome Shell kwi-Ubuntu 17.04 Zesty Zapus
Ngeli xesha ndiza kukubonisa indlela yokufaka i-Gnome Shell kwi-Ubuntu yethu, nangona ingabalulekanga kangako kuba kukho inguqulelo ye-Ubuntu Gnome.
I-KDE Plasma 5.10 ngoku iyafumaneka ngeFold View njengojongano olumiyo
I-KDE Plasma 5.10 iqale ngokusemthethweni kwi-Folder View interface yedesktop kunye nolunye uphuculo esikutyhila kulo myalezo.
I-KDE Plasma 5.8.7 LTS imeko-bume yedesktop ngoku iyafumaneka ngaphezulu kwezongezelelo ezingama-60
Indawo ye desktop ye-KDE Plasma 5.8.7 LTS ngoku iyafumaneka kuzo zonke izabelo ze-GNU / Linux ngezincedisi ezininzi kunye nokulungiswa kwe-bug.
Ngoku kunokwenzeka ukufikelela kwiakhawunti kaGoogle Drayivu kwi KDE Plasma 5 iidesktops
Indawo ye KDE Plasma 5 yedesktop ekugqibeleni ikhuphe ukuhlanganiswa okusemthethweni kweGoogle Drayivu. Sityhila indlela yokongeza iakhawunti yakho yeDrive ngokulula.
Indawo ye-Desktop ye-GNOME 3.24.2 yeDesktop ifumaneka ngokusemthethweni njengenguqulelo yamvanje kuthotho
Idesktop yeGNOME 3.24.2 ngoku iyafumaneka ukuze ikhutshelwe njengokuhlaziywa kokugqibela kokugcinwa ngaphambi kokufika kweGNOME 3.26.
Uyifaka njani imixholo emininzi yeGnome ngomyalelo wesiphelo esinye ku-Ubuntu bethu
Sikubonisa ukuba ungayifaka njani imixholo engaphezulu kwe-20 ye-Gnome kwi-Ubuntu ngomyalelo omnye wesiphelo kunye neskripthi esincinci esenziwe ekhaya ...
ICinnamon 3.4 imeko-bume yedesktop ngoku ifumaneka ngeenguqu ezininzi
Imeko-bume yeCinnamon 3.4 yedesktop ngoku iyafumaneka ngeetoni zotshintsho kunye nophuculo. Ukongeza, iya kufika njenge-desktop emiselweyo yeLinux Mint 18.2.
Umphathi weSakhiwo se-GNOME, isicatshulwa esiza kwenza ukuba i-GNOME Shell ibonakale ngathi yiWindows, iMac okanye ubunye
Ukuba ufuna i-GNOME Shell ijongeke njengeWindows, iMacOS okanye uManyano, sichaza indlela yokufezekisa ngoku ngokulula usebenzisa iskripthi soMphathi weSakhiwo se-GNOME.
I-GNOME 3.26 imeko yendalo yedesktop iya kufika ngokudityaniswa kweTodoist
Iimpawu kunye nezincedisi zikhutshiwe namhlanje kwi-GNOME 3.26 yendalo esingqongileyo yedesktop, ecwangciselwe ukuqala ngoSeptemba 13, 2017.
I-KDE Plasma 5.9.5 i-debuts kungekudala ngaphambi kokuba i-KDE Plasma 5.10 ikhutshwe
Indawo ye desktop ye-KDE Plasma 5.9.5 ngoku iyafumaneka, kodwa abaphuhlisi balungiselela ukukhupha i-KDE Plasma 5.10 ekupheleni kuka-Meyi.
IGnome Shell nayo iya kuba neMenyu yeHlabathi
Imenyu yeHlabathi iya kuthi ekugqibeleni ibe kwiinguqulelo ezilandelayo ze-Ubuntu enkosi kulwandiso lweGnome Shell, ulwandiso esiya kusinikwa yiMenyu yeHlabathi ...
Isibongozo sisungulelwe i-KDE Plasma ukuba ibe yidesktop ka-Ubuntu endaweni yeGNOME
I-Linuxeros iphumeze uxwebhu lwezikhalazo ukuze iqinisekise iCanonical ukuba isebenzise i-KDE Plasma desktop endaweni ye-GNOME kwi-Ubuntu 18.04 ezayo.
Iimpawu zokuqala zokuqala ze-GNOME 3.26 kwimo ye desktop
Imeko-bume ye-desktop ye-GNOME 3.26 iya kufika ngoSeptemba 13, 2017, kodwa imisebenzi yokuqala kunye neendaba sele zaziwa.
Ungabususa njani ubumbano 8 kwi-Ubuntu 17.04 Zesty Zapus
Ngoku ekubeni sisazi ukuba ubunye 8 abuzukuphuhliswa ngakumbi, kutheni unayo kwi-Ubuntu 17.04? Apha sikubonisa indlela yokususa ngokupheleleyo.
Ungayitshintsha njani ifonti yokubhaliweyo kwiGnome Shell
Isifundo esincinci sendlela yokutshintsha ifonti yokubhaliweyo kumxholo weShell yeGnome okanye endaweni yoko kwiGnome Shell kuba sonke sisebenzisa umxholo ...
UMark Shuttleworth ucacisa ngokubanzi iindaba zokutshintsha kwedesika
UMark Shuttleworth uthethile ngotshintsho olutsha oluza kubakho ku-Ubuntu, esazisa ngekamva le-MIR, Unity 7 okanye iGnome Shell e-Ubuntu ...
I-Red Hat kunye ne-Fedora yamkela Ubuntu kwi-GNOME
Ukuphendula akukhawulezi ukuza, kwaye iRed Hat kunye neFedora ziyavuya ziindaba zokuba uBuntu uza kusebenzisa imeko yemizobo yeGNOME kwakhona.
IGNOME 3.24 ngoku iyafumaneka kwaye zezi ziindaba zayo
IGNOME 3.24 iza nophuculo oluninzi oluya kuthethelela ukufuduka ngenkani kwezicelo zakudala zedesktop kwindawo entsha.
I-KSmoothDock, enye indlela efanelekileyo ukuba ufuna i-Plasma dock entsha
Ukuba usebenzisa iPlasma 5 kwaye ufuna ukusebenzisa i-dock ngeendlela ezahlukeneyo, i-KSmoothDock isenokuba lolunye uhlobo obukade ulufuna.
I-Mycroft, umthombo wokuqala ovulekileyo ongumncedisi welizwi uza kwi KDE
UMycroft, ongumncedisi welizwi wokuqala ovulekileyo kwihlabathi (uhlobo lweSiri) ufikile kwimeko ye KDE ngohlobo lweplasmoid.
IGnome Pomodoro, isicelo esiluncedo sonyusa imveliso yethu Ubuntu
IGnome Pomodoro sesinye sezona zicelo zidumileyo ngaphakathi kweGnome ukusebenzisa indlela yePomodoro, esi sixhobo sinokufakwa kwi-Ubuntu ...
Ukuphinda usebenzise, ​​ukhetho olufanelekileyo lokufunda ii-comics ku-Kubuntu
Ukuphinda usebenzise i-comic reader ye-Kubuntu esinokuyifaka ngaphandle kwaye eqhuba ii-comics zedijithali kunye nolunye ufundo kakuhle ...
INautilus 3.24 iya kubakho kwi-Ubuntu 17.10
INautilus 3.24 iya kuba luhlobo olukhulu olufikelela ku-Ubuntu 17.10, uguqulelo olutsha oluya kuhlala kwiikhompyuter zethu ngo-Okthobha olandelayo ...
Le yi-UKUI, indawo yemizobo yeLinux esekwe kuyo Windows 7
Ngaba ungathanda ukusebenza kunye nomsebenzisi njenge Windows 7 kwiLinux? Kule posi siza kuthetha ngendawo yemizobo ye-UKUI.
I-5 Ubuntu Ubunye beempawu onokungazi ngazo
Idesktop yobumbano inezinto ezinomdla kwindalo esingqongileyo. Kule posi uyakufumanisa ukuba zeziphi ezona zinto zincinci zaziwayo zoManyano.
Izicelo ezininzi ze KDE zifika kwifomathi ye-Ubuntu snap
Abaphuhlisi abaliqela be KDE bahambisa amathala eencwadi e-KDE kunye nokusetyenziswa kwifomathi ye-snap, ifomathi ejongeka ngathi iyonke i KDE desktop izakuthatha
Into elungileyo ngeLinux kukuba sinokutshintsha ujongano lwayo kunye nemiyalelo embalwa. Apha sikubonisa indlela yokufaka ezona desktops zidumileyo ku-Ubuntu.
Uyikhawulezisa njani i-Unity Dashboard kwiikhompyuter ezindala
Sikubonisa indlela yokukhawulezisa ideshbhodi yobumbano kwiikhompyuter ezindala ukuphucula ukusebenza ngokukhubaza isiphumo sokufiphaza.
UMATE 1.16 ngoku uyafumaneka ukukhutshelwa kunye nokufakwa
Ukuba usebenzisa indawo yemizobo ye-MATE, uya kuba nomdla wokwazi ukuba uMATE 1.16 sele efumanekile ukukhuphela kunye nokufakwa kwe-Ubuntu MATE kunye nezinye iinkqubo.
Imowudi yemizobo ephantsi isondele kuBumbano 7
Imowudi yemizobo ephantsi iya kukhutshwa kungekudala kubumbano 7 kumaqela anezixhobo ezinqongopheleyo. Indawo ezikuyo zoomatshini ziya kuthi zixhamle.
Uyifaka njani i-KDE Qhagamshela isalathiso, inkqubo enomdla kubasebenzisi beUbunye
Isalathi se KDE soQhagamshelo yiplagi yenkqubo edumileyo ye KDE esinceda ukuba sibe namava angcono kwiidesika ezingezizo ze KDE ...
Uyibeka njani iWindows kwiUmanyano
Isifundo esincinci sendlela yokubeka iifestile kuManyano njengoko sivula usetyenziso oluhambelanayo, into enokwenziwa ngokulula ...
Uyifaka njani i-KDE Plasma 5.8 LTS kwiinguqulelo zamva nje ze-Ubuntu
IPlasma yenye yezona ndawo zinomtsalane kwaye zisebenza kakuhle kwimizobo esinokuyifumana kwiLinux. Apha sikubonisa ukuba uyifaka njani.
Ubunye 8 busengayitshintsha inkangeleko yayo yokugqibela
Ubumbano 8 abubonakali ngathi bubonakala okokugqibela okwangoku okanye ubuncinci bunqunyanyisiwe kuvavanyo lwakutsha nje oluqulathwe yiCanonical kubasebenzisi bayo ...
Izinto ezinomdla ezinokwenziwa kwiPlasma 5.x
Ngaba uyayisebenzisa imeko yePlasma yemizobo? Kule posi siza kukubonelela ngamanye amaqhinga ukuze ube nemveliso ngakumbi kwenye yezona ndawo zintle zemizobo.
Guqula iphepha lodonga leCinnamon ngale ndlela ilula
Sikuxelela ukuba ngeskripthi esincinci kunye nenkonzo ye-imgur esinokuthi siyitshintshe ngayo iphepha lodonga lweCinnamon desktop ngokuzenzekelayo ...
I-GNOME Shell 3.23.2 kunye neMutter 3.23.2 ngoku iyafumaneka
Zombini i-GNOME Shell kunye neMutter zihlaziyiwe kwiinguqulelo zeGNOME zeShell 3.23.2 kunye neMutter 3.23.2 eneempawu ezintsha kunye nophuculo lwangaphakathi.
I-KDE Plasma 5.8.4 LTS iza nokulungiswa kwe-bug
I-KDE Plasma 5.8.4 ngoku iyafumaneka, inguqulelo entsha yale graphical imo yendalo eza nenjongo yokulungisa iimpazamo kunye nokuphucula ukusebenza.
ICinnamon 3.2 ngoku iyafumaneka. Uyifaka njani Ubuntu
Ukulinda kugqityiwe. ICinnamon 3.2 ngoku iyafumaneka kwiindawo zokugcina ezisemthethweni. Apha siza kukubonisa indlela yokufaka Ubuntu.
Yintoni ngoku kwi-Unity 8 ye-Ubuntu 17.04 Zesty Zapus kunye nento ezayo
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba kuya kuba yintoni kwi-Unity 8 xa kukhutshwa Ubuntu 17.04? Kule posi siza kuthetha malunga nokuza kwindawo entsha yemizobo.
Ubuntu Budgie, kuphela ukusasazwa koBuntu okuya kuba nedock serial
Idokethi entsha kunye nepaneli yeRaven ehlaziyiweyo iya kuba yinto ephambili kunye neenoveli kwi-Ubuntu Budgie 17.04 entsha, incasa entsha esemthethweni yoBuntu ...
ICinnamon 3.2 ngoku ilungile kwaye iya kubandakanya inkxaso yeepaneli ezimileyo
Iindaba ezimnandi ukuba uyayithanda imeko yemizobo yeLinux Mint: umphuhlisi wayo sele ebhengeze ukuba iCinnamon 3.2 iya kubandakanya inkxaso yeepaneli ezimileyo ..
Ungayongeza njani iApplet yeKhombisi kwiBudgie Remix okanye Ubuntu ngeBudgie
Isifundo esincinci sendlela yokufaka i-Applet ye-Indicator kwi-Budgie Desktop okanye kwi-Budgie Remix, incasa entsha edumileyo yoBuntu ethi iBudgie Desktop inayo ...
Ukuhlela imenyu ye-GNOME nge-Meow
Nge-Meow ungahlela useto lwefayile ye-GNOME kwaye uhlengahlengise iimenyu zesicelo ukuthanda kwakho, nokuba kungohlobo okanye umxholo.
Ungaba njani neMenyu yeHlabathi kwiLinux Mint okanye iCinnamon
Isifundo esincinci sendlela yokufaka kunye neMenyu yeHlabathi kwidesktop yeCinnamon okanye kwiLinux Mint, nakweyiphi na ingxelo yale ...
Uyifaka njani inguqulelo yamva nje yeBudgie Desktop kwi-Ubuntu 16.10
Isifundo esincinci sendlela yokufaka ingxelo entsha ye-Budgie Desktop kwi-Ubuntu 16.10, inguqulelo yamva nje yale desktop eyenziwe ngabasebenzisi bakaSolus.
Imenyu yehlabathi iya kubuyela kwi-KDE Plasma 5
Imenyu yenkqubo yehlabathi iya kubuya kwinguqulelo elandelayo ye-KDE Plasma 5 desktop, eya kuphuculwa kwikamva kunye nemixholo emitsha kunye nee icon.
Ubuntu Budgie akafikeleli kwiYaketyety Yak nokuba; UBudgie Remix 16.10 uyeza kule mpelaveki
Ndandijonge phambili kuyo, kodwa uvuyo lwam equleni: Ubuntu Budgie uya kuhlala eyiBudgie-Remix ubuncinci kude kube kukhutshwa Ubuntu 17.04.
UMATE 1.16 ngoku ufumanekayo kwi-Ubuntu MATE 16.10
Imeko ye-MATE 1.16 yemizobo ngoku iyafumaneka kwi-Ubuntu MATE 16.10, i-Yakkety Yak brand MATE flavour eya kufika ngo-Okthobha 13.
Ubuntu GNOME 16.10 beta 2 ngoku iyafumaneka ngokusetyenziswa okuhlaziyiweyo kunye notshintsho olukhulu
Landela ukubala umva. Ngeli xesha siyitsho kuba Ubuntu GNOME 16.10 sele ikhuphe i-beta yesibini yale flavour esekwe ku-Ubuntu.
UMATE 1.16, inguqulelo entsha yedesktop eyaziwayo, ngoku iyafumaneka
UMATE 1.16 yinguqulelo entsha yedesktop eyaziwayo esekwe kwi-Gnome 2, nangona ngoku inelayibrari yeGTK3 + kunye nokulungiswa kwe-bug ...
I-Linux Mint 18 "Sarah" KDE ngoku iyafumaneka
Inguqulelo ye KDE yeLinux Mint 18 "Sarah" LTS iphehlelelwe, kunye nokuphuculwa okutsha kunye nokusebenza okujolise ekuhlangabezeni iimfuno zokusebenzisa le desktop.
UKubuntu usaphila kwaye ulungile kwi KDE Akademy
Kodwa ngubani ongathandabuzekiyo? Kwi-KDE Akademy bathi uKubuntu usaphila, ewe, kwaye iyaqhubeka nokukhula yomelele kunakuqala.
Ubuntu Gnome 16.10 iya kuza neseshoni kunye neWayland
I-beta yokuqala ye-Ubuntu kunye neencasa ezisemthethweni ezinje nge-Ubuntu Gnome 16.10 ngoku iyafumaneka, inguqulelo eneseshoni yeWayland okanye iGnome 3.20 ..
Ukhuphiswano lwephepha lodonga Ubuntu GNOME 16.10 luqala
Ukhuphiswano lwephepha lodonga lwe-Ubuntu GNOME 16.10 luqala. Kukho umhla wokugqibela kude kube ngu-2 kaSeptemba ukuthumela uyilo.
Uyibeka njani ibar yenkqubela phambili yeFirefox kubumbano
Isongezo esincinci seFirefox sikuvumela ukuba ubazi ubume bokukhutshelwa kwesikhangeli sakho kwiwebhu ngezaziso zobunye
Iimephu zeGnome ngoku ziyafumaneka ngenxa yebhokisi yeMaphu
Okokugqibela Imephu zeGnome ziyasebenza kwakhona, konke enkosi kwinkonzo ye-Mapbox, inkonzo yasimahla eya kuthi ibonelele ngokufana neMephu yokufuna usetyenziso oludumileyo ...
Ubuntu Budgie Remix 16.04.1, incasa engafanelekanga ifumana uhlaziyo lwayo
Uhlaziyo lwe-Ubuntu Budgie Remix ngoku luyafumaneka, Oko kukuthi, Ubuntu Budgie Remix 16.04.1, uguqulelo lwencasa kwinkqubo yokuba sesikweni ...
Beka iHimawaripy imvelaphi eguqukayo yoMhlaba kwidesktop yakho
I-Himawaripy yinkqubo eyenziwe ngePython ekhuphela iifoto zomhlaba kwi-desktop yethu, ngaloo ndlela ivelisa imvelaphi eguqukayo.
I-GNOME yazisa ngokuphuculwa kukhetho lwekhibhodi
Uhlengahlengiso lwangaphakathi lwe-GNOME luyaqhubeka nokufikelela kwinkqubo entsha yokusebenza, ngeli xesha, iphaneli yokumisela ikhibhodi.
Ubunye buphuculwe kwi-Ubuntu 16.04 LTS yeekhompyuter ezinesixhobo esisezantsi
ICompiz ilungiselelwe ukusetyenziswa okuncinci kwezixhobo kwi-Ubuntu 16.04 LTS, ukugcina uninzi lweziphumo kunye nokugcina umoya wobumbano.
Faka umxholo we KDE Breeze kwi-GNOME
Sele siyazi ukuba zininzi ii-distros ze-GNU / Linux, kwaye ukuba sigxila ku-Ubuntu, sinemali elungileyo ekhoyo ...
Iimephu zeGnome zisenokungabikho kwi-Ubuntu 16.04.1 LTS
Uhlelo lokusebenza lweeMephu zeGnome lusokole ukubuyela umva xa iMapQuest yengozi, ngenxa yoko ijonge enye indlela yokusombulula ingxaki kodwa inokususwa
Iintsuku ezingama-30 ngeDesktop yeBudgie, isimanga kubasebenzisi abafuna into ezinzileyo
Inqaku elincinci malunga namava am ndisebenzisa iBudgie Desktop, idesktop entsha emangalisa ngokuzinza, ukusebenza ngokupheleleyo kunye nokuvelisa ...
Faka i-HUD efana nobunye kuyo nayiphi na indawo esekwe kubuntu
Njengoko abo basebenzisa Ubuntu kunye noManyano sele beyazi, le distro iza nesixhobo esiluncedo kakhulu esifakelwe ...
Guqula icon ye-Unity launcher kwi-Ubuntu 16.04 LTS yakho
Njengoko sele sazi, enye yezona zinto zinomtsalane kwiGNU / Linux kwaye ngakumbi Ubuntu kwaye uninzi lwe ...
Hlela kwaye wabelane ngeefoto zakho kuKubuntu noGwenview
Kule nqaku sifuna ukuthetha ngesixhobo esinomdla kakhulu sokulawula iifoto zethu kwaye sabelane ngazo kwiinethiwekhi zethu ...
ICinnamon 3.0.4, inguqulelo entsha enezilungiso zegciwane
ICinnamon 3.0.4 yinguqulelo yamva nje yolondolozo ekhutshwe liqela leLinux Mint ukulungisa iibugs ezikhoyo kwidesktop yangoku ...
Ubuntu MATE 16.10 ihambela kwi-GTK3 kwaye yamkela iiphakheji ze-Snap
Ukuqala nje ukuphuhliswa kwe-Ubuntu MATE 16.10 siyazi ukuba iCnonical iya kubheja kwi-GTK3 kolu hlobo kwaye ixhase itekhnoloji.
Ungayigcina njani i-Cinnamon Applets, iZandiso kunye neeDesk
Siyazi ukuba kubiza malini ukwenza ufakelo olucocekileyo, ke sichaza indlela yokugcina iapplet, izandiso kunye neidesika eCinnamon.
Ubumbano 8 ayisayi kuba yi-desktop ye-Yakkety Yak
Ubunye 8 abuyi kuba Ubuntu 16.10 Yakkety Yak desktop emiselweyo, into esingayilindelanga kodwa ayenzi Ubuntu 16.10 ingabalulekanga ...
Ubuntu MATE 16.04 yeRaspberry pi ngoku isemthethweni
Isiqingatha seveki kamva, abaphuhlisi be-Ubuntu MATE sele bekhuphele inguqulelo ye-16.04 LTS Xenial Xerus yeRaspberry Pi.
Uyifaka njani iCinnamon 3.0 kwi-Ubuntu 16.04 LTS
Ngokumiliselwa kweCinnamon 3.0 kunye nokuphononongwa kweyona nto iphambili, lixesha lokuba wehle uye kwishishini ...
Kule nqaku siza kukubonisa indlela yokufaka i-Xubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus, inguqu ye-Xfce Ubuntu, kwikhompyuter yakho.
Sele ndinayo Ubuntu MATE 16.04 efakiweyo. Kwaye ngoku? Kule nqaku siza kukuxelela izinto ezininzi onokuzenza ukuphucula inkqubo.
Sikubonisa indlela yokufaka Ubuntu MATE 16.04
Sele bekhuphile Ubuntu MATE 16.04 LTS, uguqulelo endilithandayo Ubuntu ngokude. Sikubonisa ukuba uyifaka njani le nguqulo intsha.
ICinnamon 3.0, iindaba ezingakumbi ngencasa yesinamon
Iinkcukacha zenqaku elitsha ledesktop ezayo yeLinux Mint 18, iCinnamon 3.0, eqaqambisa isilawuli esidumileyo esingenazingcingo esingenantambo.
Ubuntu MATE 16.04 yeRaspberry Pi 3 ibandakanya i-Wi-Fi eyakhelweyo kunye nenkxaso yeBluetooth
Okwesibini Ubuntu MATE 16.04 Beta yeRaspberry Pi 3 ngoku iyafumaneka, uguqulelo olubandakanya inkxaso eyakhelwe-ngaphakathi kwi-Wi-Fi kunye nezixhobo zeBluetooth.
Uyifaka njani i-Unity 8 kwi-Ubuntu 16.04
Isikhokelo esincinci ukuze ukwazi ukufaka i-Unity 8 ku-Ubuntu 16.04 okanye ingxelo yophuhliso yenguqulo elandelayo ye-LTS Ubuntu ...
Uyifaka njani i-Budgie Desktop kwi-Ubuntu bethu
Isikhokelo esincinci sendlela yokufaka i-Budgie Desktop kwi-Ubuntu bethu, sikwacacisa ukuba siyisusa njani ukuba idesktop entsha ayikwenzi ...
Ubuntu GNOME 16.04 LTS Beta 2 ikhutshiwe, kodwa akukho phawu lweGNOME 3.20
Kunye nezinye iincasa ze-Ubuntu, Ubuntu GNOME 16.04 LTS ikhutshwe namhlanje. Kodwa ngokungathandabuzekiyo, ifikile ngaphandle kwe-GNOME Shell 3.20 yokusingqongileyo.
Indawo yemizobo yeGNOME 3.20 ikhutshwa ngokusemthethweni
Kukhutshwe ngokusemthethweni iGNOME 3.20. Inguqulelo entsha ibandakanya ukuphuculwa okunomdla, kodwa abasebenzisi kuya kufuneka balinde ithutyana.
Ubuntu Mate 16.04 iya komeleza ukubonakala kwayo
Ubuntu Mate 16.04 iyakubandakanya ukuhonjiswa kwecala labathengi ukuphucula ukubonakala kwayo ngelixa igcina ilula kwaye iphantsi kwezixhobo.
Uyibuyisela njani iseshoni kubunye emva kokuqalisa kwakhona Ubuntu
UArnon Weinberg wenze iskripthi esinokusetyenziswa kubumbano kwaye esivumela ukuba sibuyisele iseshoni yokugqibela ebesinayo kubumbano kodwa ...
Indlela yokwandisa indawo ye-Ubuntu Mate ye-Raspberry pi 2
Ngaba uyafuna ukwandisa indawo yokwahlulahlula kwakho Ubuntu Mate kwiRaspberry Pi 2 yakho kwaye ungazi ukuba wenzeni? Ewe, apha sikubonisa ukuba kanjani.
Hlaziya i-MATE desktop yakho kwi-Ubuntu MATE 15.10
UMATE sele efikelele kuguqulelo 1.12.1, uguqulelo esinokuba nalo kubuntu bethu MATE enkosi kwindawo yokugcina enomdla kwaye eluncedo eyenziwe yiVimpress.
IPlasma Mobile iqala ukufumana ii -apps ze-Android
IPlasma Mobile sele inayo iapp, ngokukodwa iSubface, usetyenziso lwe-Android olubonakaliswe ngeentsuku ezintathu.
I-Linux Mint 17.3 (Pink) ngoku iyafumaneka ukuze ikhutshelwe
I-Linux Mint 17.3, ebizwa ngokuba yiRosa, ngoku iyafumaneka ukuze ikhutshelwe, nangona iwebhusayithi ingaphenduli ngeli xesha.
I-Dash yinto ebalulekileyo ukuba wonke umsebenzisi we-Ubuntu kufuneka ayazi ngayo, njengokuba kuyinto engaziwayo kubasebenzisi abaninzi be-novice Ubuntu.
Ukufaka Ubuntu MATE 15.10, isikhokelo sokufaka kunye namanyathelo okuqala
Isikhokelo apho sikubonisa khona indlela yokufaka kunye nokumisela amanyathelo okuqala ohlobo lwamva nje lwe-Ubuntu MATE 15.10.
Oku kukuhanjiswa kwabahleli be-Ubunlog (II): Ubuntu GNOME 15.04
Ufakelo lwesibini apho sikuxelela ukuba kunjani ukuhanjiswa kwabahleli bebhlog, iidesika zabo kunye nokunye. Kule meko sibona Ubuntu GNOME 15.04.
IGnome 3.18, ngoku iyafumaneka
Sithethe ngohlobo olutsha lwe-3.18 lwe-GNOME. Sibona ezona zinto ziphambili ukuqaqambisa ngokubhekisele kuzalisekiso kunye nokusetyenziswa okutsha.
Ubuntu bapapasha ividiyo ngeMir kunye nobunye 8
Iqela le-Ubuntu lenze ividiyo ngento entsha kubumbano 8 kunye neMir, ebonisa into enxulumene nokudibana
Nalu ulwabiwo lwabahleli be-Ubunlog: Xubuntu 14.04 LTS
Kwi-Ubunlog sigqibe kwelokuba siqale icandelo leveki apho siza kukuxelela malunga nokuhanjiswa kwabahleli bebhlog, iidesika zabo kunye nokunye.
Umxholo weArc, umxholo omtsha weewindows zakho ku-Ubuntu
Umxholo weArc ngumxholo wokwenza ngokwezifiso umphathi wakho wewindows Ubuntu. Iyahambelana neidesika ezisekwe kwi-GTK, kwaye sixelela ukuba ungayifaka njani
Yenza i-Ubuntu yakho ngokwezifiso kunye neempawu ze-Zorin OS kunye nemixholo
I-Zorin OS lulwabiwo olujolise kubasebenzisi be-novice kuyilo olunomtsalane kunye nokubetha. Ukuba ufuna ukunika umnxeba kwi-distro yakho, nantsi into.
IPlasma Mobile, uthotho olukhuphisanayo lwe-Ubuntu Touch
IPlasma Mobile ligama lenkqubo entsha yokusebenza eyenziwe yiProjekthi ye KDE kutshanje kwaye nayiphi na iapp evela kwenye inkqubo iyakusebenza.
I-Mangaka Linux, i-Ubuntu yeyona otakus
I-Mangaka Linux lulwabiwo olusekwe ku-Ubuntu kwaye lune-manga njengomxholo ophambili wolwabiwo kunye nedesktop entsha, iPantheon.
Faka iNautilus endaweni yeNemo eNtsha kubunye
INemo yenye yeefolokhwe ezinobomi obuninzi kunye nokomelela kunye neCinnamon, kodwa inokusebenza kuphela, kwesi sifundo sikuxelela indlela yokwenza
IPeppermint OS ifikelela kuguqulelo 6
I-Peppermint OS 6 yinguqulelo entsha yePeppermint OS, inkqubo yokusebenza engasindi esekwe kwi-Ubuntu 14.04 nangona isebenzisa iinkqubo ze-LXDE kunye neLinux MInt.
Uyifaka njani i-GNOME 3.16 kwi-Ubuntu GNOME 15.04
Ngoku sinokufaka i-GNOME 3.16 kwi-Ubuntu GNOME 15.04 ukonwabela ukuphuculwa kunye neendaba ezizisayo.
MATE Tweak, isixhobo esibalulekileyo ku-Ubuntu MATE
I-MATE Tweak sisixhobo esilula kwii-newbies esivumela ukuba siguqule ngokulula imbonakalo kunye noqwalaselo lwe-MATE kunye ne-Ubuntu.
Faka iinguqulelo ezintsha zeCinnamon kunye neMATE kwi-Ubuntu
ICinnamon kunye neMATE zimbini ezinye iidesktops zoBuntu, kunye needesika ezimbini eziphambili zeLinux Mint. Sikuxelela indlela yokuzifaka ku-Ubuntu.
Uyifaka njani iLubuntu 15.04
Sifakele uLubuntu 15.04, okwahlukileyo okwahlukileyo okanye incasa yazo zonke izinto ezinikezelwa yiCanonical ngokusemthethweni.
I-Xubuntu 15.04: inyathelo ngenyathelo lokufakwa
I-Xubuntu yenye yeencasa zeVivid Verbet esele ikho, masibone indlela yokuyifaka kwikhompyuter yethu.
Funda ukufaka Ubuntu MATE 15.04 kwaye wonwabe ngeyona Ubuntu yakudala
Ubuntu MATE ibuyisa i-desktop ye-Ubuntu ye-quintessential, kwaye siza kukufundisa ukuba uyifaka kwaye uyilungiselele njani ukuze ufumane okungcono kuyo.
Ubuntu 15.04 iVervet ebonakalayo, isikhokelo esincinci se-clumsy
Ubuntu 15.04 iVervet ebonakalayo ngoku iyafumaneka kwaye ilungele ukukhutshelwa. Kule posi sithetha ngofakelo kunye nokucwangciswa kweposi kwe-Ubuntu Vvet vervet.
Kwiintsuku ezimbalwa emva kokukhutshwa kwe-beta yamva nje, i-Elementary OS Freya ngoku iyafumaneka ukukhuphela kunye nokusetyenziswa kwemveliso. Inguqulelo yeapile kakhulu
Nxiba Ubuntu bakho uyilo olusicaba
U-Apple ukhuthaze ifashoni yoyilo olucwangcisiweyo, into engabalekisiyo ku-Ubuntu. Ngalesi sifundo sincinci sinokuba noyilo olucaba kwi-Ubuntu bethu.
I-Linux Lite 2.2, inguqulelo ephuculweyo yeekhompyuter enezixhobo ezimbalwa
I-Linux Lite 2.2 yinguqulelo yamva nje yosasazo oludumileyo lweekhompyuter ezinobutyebi obusezantsi. Isekwe kwi-Ubuntu 14.04 kwaye ikwanomphunga wokudlala
Uyifaka njani iXFCE 4.12 kwiXubuntu 14.04 okanye 14.10
Inguqulelo yamvanje yeXFCE ngoku iyafumaneka. Sikuxelela ukuba ungayifaka njani kwiXubuntu 14.04 okanye kwi-14.10 ngendlela elula. Ngena ukuze wazi ngakumbi
Ungayitshintsha njani iLubuntu ibe yiGnome Classic
Isifundo esincinci esiqulathe ukunika uLubuntu imbonakalo yeGnome Classic okanye i-Gnome desktop ngaphambi kwenguqulo yayo 3, etshintshe yonke idesktop.
IPlasma 5, yintoni entsha evela kwi KDE
I-KDE ibhengeze ukuba ikhupha ingxelo entsha yePlasma. IPlasma 5 ibandakanya inkxaso ebalaseleyo kwimiboniso ye-HD, i-OpenGL kunye nokuphucula imeko yayo yomsebenzisi.
Isifundo esincinci sendlela yokongeza kunye nokususa usetyenziso kwinkqubo yokuqalisa Ubuntu, into elula ukuba unidesktop epheleleyo.
Uyifaka njani iMATE 1.8 kunye neCinnamon 2.2 kwi-Ubuntu 14.04
Isifundo esincinci sendlela yokufaka iMATE 1.8 kunye neCinnamon 2.2 kuhlobo lwamva nje lwe-Ubuntu, kwiTrusty Tahr. Inguqulelo yokuba kude kube ngoku ayibaxhasi.
LXQt ikamva le-LXDE kunye neLubuntu?
Thumela malunga ne-LXQT inguqulelo entsha ye-LXDE esekwe kwi-LXDe kodwa ngamathala eencwadi e-QT, ekhaphukhaphu kunokusetyenziswa kwamathala eencwadi e-GTK kuhlobo lwayo lwamva nje.
Ukuhanjiswa kwe-Gnu / Linux kwiikhompyuter ezindala
Thumela malunga nosasazo olu-5 oludumileyo lweekhompyuter ezindala, ulwabiwo olusekwe ku-Ubuntu okanye kwi-Debian kwaye lujolise kwiikhompyuter ezindala.
Thumela into omawuyenze emva kokufaka Ubuntu 14.04 kwaye ujongane nezona ngxaki zixhaphakileyo kuhlobo lwamva nje lokusasazwa kweCanonical.
I-Pantheon, uyifaka njani Ubuntu
Isifundo esincinci sokufaka iPantheon, i-Elementary OS desktop kwi-Ubuntu yethu, kunye nethuba lokunika oko kubonakala.
Ukufaka iMATE 1.8 kwi-Ubuntu 13.10 kunye ne-12.04
Isikhokelo esilula esichaza indlela yokufaka uMATE 1.8 kwi-Ubuntu 13.10 nakwi-Ubuntu 12.04. UMATE yifolokhwe yesebe le-2.x yeGNOME eyaziwayo.
UGuadalinex Lite, ubuntu baseSpain obuyi-128 mb yenkunzi yegusha
Iindaba malunga nokuqaliswa kweGuadalinex Lite, usasazo olutsha lweAndalusius olusekwe kwiGuadalinex V9 kodwa ngesixhobo esiphelelwe lixesha okanye esidala.
Ubuntu 14.04: ekugqibeleni uya kuba nakho ukunciphisa windows kwi-launcher
Kwi-Ubuntu 14.04 LTS izicelo zeTahr ezinokuthenjelwa ekugqibeleni zinokuncitshiswa ngokunqakraza kwi-Unity launcher icon.
Ubuntu 14.04 LTS iphepha lodonga elisemthethweni
Iimpawu ezisemthethweni ze-Ubuntu 14.04 zityhilwe, zombini zikhethwe kukhuphiswano loluntu kunye nokusilela okutsha.
I-KXStudio, ukuhanjiswa kwemveliso esekwe kubuntu
I-KXStudio iseti yezixhobo kunye nee-plug-ins zemveliso yeaudiyo nevidiyo. Ulwabiwo lusekwe kwi-Ubuntu 12.04 LTS.
Ubuntu 14.04: iimenyu kwibar yomxholo
Kwi-Ubuntu 14.04 ibha yemenyu inokuboniswa kwibha yesihloko yeewindows. Iindaba ezigqwesileyo kwabo bangayithandiyo imenyu yehlabathi.
Lxle, ulwabiwo olufanelekileyo lokuvuselela iqela lakudala
Inqaku malunga ne-LXLE, usasazo olusekwe kwiLubuntu 12.04 kwaye ijolise kwiikhompyuter ezinezixhobo ezimbalwa. Izama nokutshatisa inkangeleko yeWindows.
I-Kronometer, isitophuwotshi esipheleleyo se KDE Plasma
I-Kronometer isitopwashi esilula kodwa esipheleleyo se-KDE Plasma ephuhliswe ngu-Elvis Angelaccio kwaye yasasazwa phantsi kwelayisensi ye-GPL.
IZorin OS 8 ilapha
Iqela leZorin OS likhuphe u-8 weZorin OS Core kunye neZorin OS Ultimate kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. I-Zorin OS 8 lusasazo olusekwe kwi-Ubuntu 13.10.
Uzifakela njani izandiso kwiCinnamon
Isifundo esincinci sendlela yokufaka ulwandiso kwidesktop yeCinnamon, usebenzisa iwebhusayithi esemthethweni yedesktop, enolawulo lwezandiso
Iibhanti zamanzi asimahla zeKrita
Umsebenzisi kunye nomculi uVasco Alexander wabelane noluntu ngepakethi yeebhulashi zamanzi zeKrita. Iphakheji isimahla.
KWin, umphathi wefestile kwiindawo ezahlukeneyo zedesktop
UMartin Gräßlin, umphuhlisi kwi KWin, wabhala iposti ethetha malunga nokusebenzisa umphathi wefestile kwezinye iimeko ze desktop.
Ungazikhubaza njani iingcebiso zeAmazon ku-Ubuntu 13.10
Isikhokelo esilula esichaza indlela yokukhubaza iingcebiso zeAmazon, i-eBay kunye nezinye iinkonzo ezifanayo ze-Unity Dash ku-Ubuntu 13.10.
I-Orca, inkqubo elungileyo yeemfama
Inqaku malunga ne-Orca, isoftware enkulu yokufunda izikrini okanye ukudibanisa izixhobo zeBraille, inkqubo eluncedo kubantu abangaboniyo abafuna ukusebenzisa Ubuntu
Umhleli odibeneyo weXfce4, isixhobo esifanelekileyo kwiXubuntu yethu
Isifundo esincinci kwi-Xfce4 Composite Editor, isixhobo esivumela ukuba siqwalasele kwaye siguqule i-desktop yethu ye-Xfce okanye i-Xubuntu yethu.
Indaleko, sisixhobo seposi
Isifundo kunye nenkcazo malunga ne-Evolution, usetyenziso olwenzelwe ukulawula ulwazi, ukufakwa kwalo ku-Ubuntu kunye namanyathelo okuqala kulo.
Ungalukhubaza njani uluhlu lwamaxwebhu akutshanje kwi KDE
Nangona kungekho khetho kukhetho lwenkqubo ye KDE, uluhlu lwamaxwebhu akutshanje anokukhubazeka. Sichaza njani.
Imenyu yeWhisker okanye indlela yokwenza imenyu yesiko kwiXfce
Isifundo ngendlela yokufaka iMenyu yeWhisker, isicelo esivumela ukuba sibe nemenyu enokuqwalaselwa kwiXfce nakwiXubuntu.
Iindlela ezi-3 zokufaka i-KDE ku-Ubuntu 13.04
Ukuba ungumsebenzisi we-Ubuntu 13.04 kwaye ufuna ukuvavanya indawo yokusebenza ye-KDE kunye nokusetyenziswa, ungafaka i-KDE ku-Ubuntu ngomyalelo olula.
I-DockBarX kwiXfce, uyifaka njani Windows 7 ibha kwiXfce
Isifundo esinomdla ngendlela yokufaka iDockBarX kwidesktop yethu yeXfce, ukwazi ukubonakala ngeWindows 7 ukuba uyafuna.
Isalathiso semozulu, imeko yemozulu kwiphaneli Ubuntu
Imozulu yesalathi sisalathiso sephaneli ye-Ubuntu esivumela ukuba siqonde iimeko zemozulu zesixeko sethu.
Isifundo ngendlela yokwenza ngokwezifiso i-Login Screen ukuba siyithande kwaye ngendlela yobungcali ngesixhobo se-dconf-izixhobo eziza ku-Ubuntu
Inqaku malunga ne-Xfce Theme Manager, inkqubo esivumela ukuba siguqule imixholo ye-Xfce yedesktop, ke oko kufanelekile kuphela kwi-Xubuntu nakwiziphumo.
Iindlela ezimfutshane ezinqumlayo kwi-Xfce desktop
Isifundo esinomdla ngendlela yokuseta ezinqumlayo kwi-Xfce desktop, nokuba yeyoku-Xubuntu, Ubuntu ene-Xfce okanye nayiphi na into evela ku-Ubuntu
Ukuseta iidesktops ezibonakalayo kwi KDE
Ukongeza, ukususa kunye nokuqwalasela iidesktops ezibonakalayo kwi KDE ngumsebenzi olula kakhulu enkosi kwimodyuli yoqwalaselo ehambelanayo.
Ukutshintsha ubungakanani besikhombisi kunye nomxholo kwi KDE
Ukutshintsha ubungakanani kunye nomxholo wesikhombisi kwi KDE kulula ukubulela kwimodyuli yoqwalaselo 'Umxholo wesikhombisi'.
I-HUD 2.0, isixhobo esigqibezele ngakumbi
Emva kwe-HUD eboniswe kwintengiso yethebhulethi Ubuntu ngumsebenzi omkhulu. Kuqwalaselwa ngokukodwa ukuqondwa kwentetho.
I-KDE: Beka ibha yemenyu kwibar yomxholo
Kwi KDE SC 4.10 kunokwenzeka ukuba ufihle ibar yemenyu yewindow, ubeke endaweni yayo ngeqhosha kwibar yewonga. Kwaye ilula kakhulu.
Uyongeza njani inkxaso ye-MTP ku-Kubuntu
Isikhokelo esichaza indlela yokongeza inkxaso ye-MTP kwiDolphin ngokufaka i-KIO-slave ehambelanayo. I-MTP isetyenziswa zizixhobo ze-Android, phakathi kwabanye.
I-KDE 4.10: Uphuculo lweKate
Inguqulelo entsha kaKate efakwe kwi-KDE SC 4.10 inoluhlu olubanzi lweempawu ezintsha, izincedisi, kunye nokulungiswa kwe-bug.
Indlela entsha yokuqwalasela imiboniso kunye nokubeka iliso kwi KDE
UDan Vrátil kunye noAlex Fiestas baphucule ngokubonakalayo kwaye babeke esweni ulawulo kwi-KDE, bayenza yalula kwaye isebenziseka lula.
KDE: Ukongeza kunye nokususa usetyenziso olusebenzayo xa kuqaliswa
Isikhokelo esichaza indlela yokongeza nokususa ukwenziwa kwezikripthi kunye neenkqubo kwisiqalo se KDE kwimodyuli yoqwalaselo ye-Autorun.
INautilus: Ukukhubaza uLuhlu lwamaXwebhu lwamva nje
Ukukhubaza uluhlu lwamaxwebhu akutshanje eNautilus yinkqubo elula, vele uhlele ifayile yoqwalaselo.
I-KDE 4.10: Uphuculo kwiGwenview 2.10
Nge KDE SC 4.10 kuza uGwenview 2.10. Ukungenisa ngaphakathi okuphuculweyo kunye nenkxaso yeeprofayile zombala zezinye zeempawu ezintsha zombukeli womfanekiso.
Ukukhubaza ukwenziwa kweenkonzo kwi KDE
Kwi-KDE singazikhubaza ngokulula ezo nkonzo singenamdla wokuziqhuba ekuqaleni kweseshoni, ukukhawulezisa ukuqalisa kwenkqubo.
Ukuqalisa kwakhona umanyano
Ngamanye amaxesha ubunye buqala ngokuziphatha ngokungachananga okanye kancinci; Ukubuyela esiqhelweni, kuya kufuneka uphinde uqale ubunye ngomyalelo ofanelekileyo.
KPassGen, umvelisi wegama eligqithisiweyo le KDE
I-KPassGen ngumvelisi wegama eligqithisiweyo elikwi KDE ekuvumela ukuba wenze amagama okugqitha abalinganiswa abali-1024 ngokukhawuleza nangokulula.
Ukuseta usetyenziso olungagqibekanga kwi KDE
Ukuseta usetyenziso olungagqibekanga kwi KDE ngumsebenzi olula kakhulu, kuthatha kuphela ukunqakraza kwimodyuli yoqwalaselo.
Ukuhanjiswa: Umthengi olula, olula kwaye onamandla weBitTorrent
Unikezelo ngumthengi womnatha weBitTorrent osindayo kwaye unamandla ngeendlela ezahlukeneyo. Inokuqhutywa kuphela njengedemon.
I-KDE 4.10: Ukubeka iliso kunye nokuPhuculwa koLawulo lokuBonisa
I-KDE 4.10 iya kuba nembonakalo entsha kunye nephuculweyo kunye nokujonga imodyuli yoqwalaselo ebhalwe ngokupheleleyo kwi-QML.
Guqula iifonti kwi KDE
KDE ikuvumela wenze ngokusesikweni i desktop ngokutshintsha ngokulula iifonti ezahlukeneyo ezisetyenziswa kwinkqubo.
Ukwenza ngokwezifiso iibar zesixhobo ze KDE
Ukulungelelanisa iibar zesixhobo ze KDE kwiimfuno zomsebenzisi kuthatha konqakrazo nje olumbalwa.
Ukulungisa ukujonga komanyano ngezixhobo ze-Ubuntu-tweak
Isifundo sevidiyo esilula ukufaka izixhobo ze-Ubuntu-tweak kunye nezona ziseto zobumbano kunye nezinto ekufuneka zizitshintshile
Ukongeza iiplasmoids kwi KDE
Ukongeza ii-plasmoids kwidesktop ye KDE kunye nedashboard ngumsebenzi okhawulezayo nelula.
Ubume bam 3.1.3, thatha ulawulo lwepaneli yobumbano Ubuntu
Amanyathelo alula omele ukulandela ukufaka i-Myunity kwi-Ubuntu 12.04 kunye neenguqulelo zangaphambili. NgoMyunity siza kuba nolawulo lwe-Unity desktop.
Ukwenza uxhulumaniso lweVPN kwi KDE
Ukwenza uxhulumaniso lwe-VPN usebenzisa i-OpenVPN kwi-KDE kulula kakhulu ukubulela kwi-KNetworkManager.
Iindlela ezimfutshane ezinqumlayo kwi-Ubuntu 12.04
Ukuba uthanda ukuphatha iindlela ezimfutshane zekhibhodi ukuze zisebenze kwidesktop yakho, kwi-Ubuntu 12.04 LTS uya kuba ...
[Umanyano] Yongeza i-icon ebonisa i-desktop kwisiqalisi
Ubunye abuzisi i-applet ku-Ubuntu 11.04 ukubonisa i-desktop kwisiqalisi, ukuba endaweni yoko kukho ...
Umanyano okanye iGnome Shell?
Esi sithuba sendwendwe esibhalwe nguDavid Gómez esivela kwihlabathi ngokweLinux. Izolo Ubuntu 11.04 Natty ukhutshiwe ...
Nika amandla ikhiphedi yamanani ku-Kubuntu kwisiqalo
Ingcebiso eya kuthi ngokuqinisekileyo ibe sisidenge, kodwa ndimtsha kwi-KDE, ke yonke into ...